देशभर बारम्बार अघो’षित लोडसेडिङ ; के रहेछ त यसको कारण ? – Sadhaiko Khabar
देशभर बारम्बार अघो’षित लोडसेडिङ ; के रहेछ त यसको कारण ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ११, २०७८ समय: ११:१७:४८
काठमाडौं / पछिल्ला केही दिनयता सर्वसाधारण झ्याप झ्याप बत्ती जाँदा है’रान भएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणको फि’तलो व्यवस्था’पनका कारण राजधानी लगायत देशका विभिन्न स्थानमा दैनिक जसो नै बत्ती आउने जाने भइरहेको छ । यस्तो सम’स्या खासगरी देशका प्रमुख सहरहरुमा हुने गरेको उपभोक्ताहरुले बताएका छन् ।
देशभर दैनिकजसो बत्ती आउने जाने गरेको गुना’सो आउन थालेका छन् । बत्ती जाने आउने सम’स्या बढे पनि यसको दीर्घकालीन समा’धान गर्न प्राधिकरण अस’फलजस्तै देखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य भने लोडसेडिङको सम’स्या नरहेको दा’बी गर्छन् । ‘लाइन नै सर्ट भएर ट्रान्सफर्मर पट्केर कुनैबेला बत्ती गएको हुन सक्छ तर प्रणालीमा कुनै सम’स्या छैन । बत्ती जाने सम’स्या हुँदा हाम्रो भाइबर र वाट्सयापमा तुरुन्तै सूचना आउने गरेको छ । त्यसलाई हामी तुरुन्तै समा’धानसमेत गर्ने गरेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने ।
अहिले हावाहुरी चल्ने प्रति’कूल मौसमका कारण प्रसारण लाइनमा सानो सम’स्या आउँदा पनि विद्युत आपूर्ति अव’रुद्ध हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालमा वैकल्पिक प्रसारण लाइन नहुँदा कुनै एउटा खण्डमा सानो सम’स्या आउँदा पनि सो लाइनले ओगटेको ठूलो क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा अव’रोध हुने गरेको प्राधिकरणको दा’बी छ ।
यतिबेला हुरी–बतास, चट्याङ र असिनापानी पर्ने मौसम हो । प्रसारण लाइनको एउटा बाटोमा अव’रोध हुँदा सीमित वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गरेर विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्छ । एउटा लाइनको विद्युत् अर्को लाइनबाट पठाउन समय लाग्ने हुँदा केही समयका लागि विद्युत् आपूर्ति अव’रुद्ध हुने गरेको प्राधिकरण बताउँछ । याे ख’बर आजको राज’धानी दैनि’कमा छापि’एकाे छ ।